हल खुले पनि किन चलेन फिल्म ? - Pabil News
हल खुले पनि किन चलेन फिल्म ?
भदौ २७ गते, २०७८ - ०७:२४
काठमाडौ– कोरोनाका कारण लामो समयदेखि बन्द रहेका हल गत हप्ता सरकारले सञ्चालन गर्ने निर्णय ग¥यो। तर फिल्म निर्माताहरू तत्काल हलमा फिल्म लैजाने मनस्थितिमा छैनन् ।
‘कारण, काठमाडौं उपत्यकामा मात्र हल खोल्ने निर्णय गरिएको छ । त्यसमाथि ५० प्रतिशत दर्शक राखेर खोल्दा कोही पनि निर्माता यो जोखिम लिन चाहदैनन् ।
नयाँ फिल्म पनि छैनन् । कोरोना महामारीपश्चात् नयाँ सिनेमा बन्ने क्रम रोकिएको थियो। सामान्य अवस्थामा नेपालमा वर्षमा दर्जनौं फिल्म निर्माण हुन्थे। तर अहिले त्यो क्रम भंग भएको छ। मुस्किलले एक दुई वटा फिल्म मात्र निर्माण भएका छन्। त्यसमध्येको एउटा फिल्म हो– ‘चिसो मान्छे।’ निर्देशक दीपेन्द्र के खनालद्वारा निर्देशित चलचित्र ‘चिसो मान्छे’ भने यही बीचको अवधिमा निर्माण गरिएको थियो।
पोस्ट प्रोडक्सनको काम भइरहे पनि रिलिज कहिले गर्ने भन्ने अन्योल निर्माण टिममा छ। ‘हलमा दर्शक आउने नआउने थाहा छैन। त्यसकारण रिलिज गरेर नोक्सानी व्यहोर्न चाहँदैनौँ,’ उनी भन्छन्।
चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहाल नयाँ फिल्म महामारीको बीचमा खासै नबनेको बताउँछन्। ‘सुटिङमा गए पनि फिल्म तयार हुन समय लाग्छ। अहिले हामीसँग रिलिज गर्न तयार भएका बसेका फिल्म प्रायः दुई वर्ष अघिकै हुन्।
ती फिल्म पनि तत्काल रिलिज गर्न सकिने सम्भावना नभएको उनी स्वीकार्छन्। ‘चलचित्र बोर्ड, निर्माता संघ, वितरकहरूबीचमा साझा सहमतिबाट कसरी चलाउने भनेर वर्क आउट गरिरहेका छौं। त्यसपछि मात्र रिलिज कसरी गर्ने भन्नेबारे निष्कर्ष हुन्छ,’ उनी भन्छन्।
41 mins ago pabil news